Nweghachi & nkwụghachi ụgwọ - Bayu The Label
Anyị na-anakwere nkwụghachi azụ na mkpụrụ anyị niile n'ime ụbọchị 14 site na ụbọchị ị nwetara usoro gị. Naanị anyị na-ajụ na achọrọ ihe ndị a:
1. Nkebi / s ga-adị ọnọdụ mbụ na mkpado na-abanye na / ma ọ bụ akara akara ọcha dị na ebe.
2. E kwesịghị itinye ihe / sụka, eji ma ọ bụ gbanwee n'ụzọ ọ bụla.
3. Ihe anaghị eburu ihe ọ bụla site na ndozi, deodorant, ọsụsọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ha.
Anyị enweghị ike ịnakwere ọbịbịa ọ bụla na-akwadoghị ihe dị n'elu.
Anyị na-akwado dị nkenke ihe gị n'elu uwe ime gị ma na-edebe bikini na nkwakọ ngwaahịa na ebe dị ọcha ka ọ ghara ịnweta mberede ma ọ bụ ruru unyi n'ụzọ ọ bụla.
Na obere okwu na otu n'ime ihe ndị anyị na-egosi ezughị okè mgbe ị natara ya, biko mee ka anyị mara n'ime oge 48 site na iziga anyị foto nke ezughị okè site na email ma chere maka nzaghachi anyị.
Ihe di mkpa:
- Anyị anaghị enye refunds na ihe ndị zụrụ na koodu ego nke 20% ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ izipu ngwaahịa ire ere, ị ga-enweta kaadị onyinye (site na e-mail).
Anyị agaghị akwụ ụgwọ mbupu ụgwọ. (Anyị na-enye kaadị onyinye ma ọ bụrụ na anyị enweta ngwugwu ngwugwu na ọfịs anyị, mgbe ihe ndị ahụ na-akwado ihe ndị a chọrọ n'elu, anyị ga-ezipụ koodu kaadị e nyere site na e-mail.)
- Iwu anaghị akwado anyị ka anyị nabata nzaghachi n'ihi na a na-ekiri ihe ndị e ji ehicha ọcha na-eme maka bikinis anyị na ime ụlọ. Otú ọ dị anyị na-anakwere ya iji mee ndị ahịa anyị mma.
Biko soro ntuziaka anyị nke ọma ka anyị nwee ike ịkwado ndị ahịa anyị, gụnyere gị, anyị ga-enye ihe dị ọcha na ọnọdụ ọhụrụ zuru oke.
Kedu ka m ga-esi gbanwee?
Iji malite nlọghachi, naanị zitere anyị email mbụ at ahịaervice@bayuthelabel.com jiri otu adreesị ozi-e nke a na-eji ihe ndị ahụ. Biko tinye okwu nke email ahụ okwu RETURU ma gbakwunye nọmba ntinye gị (ihe atụ: NWA #1111). Biko chere maka nzaghachi anyị, anyị na-azakarị n'ime awa 24 na ụbọchị ọrụ.